लाइफलाइन अस्पतालको नयाँ अध्यक्षमा – डा. मुक्तिनाथ भट्टराई - Limbuwan khabar
लाइफलाइन अस्पतालको नयाँ अध्यक्षमा – डा. मुक्तिनाथ भट्टराई
बुधबार, २९ पुष, २०७७ रातीको ०९:०९ बजे, लिम्बुवान न्युज
दमक। दुई दशक अघि स्थापना भएको दमककै पुरानो अस्पताल लाईफलाईन अस्पताल प्रालिले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । अस्पतालको २२ औं साधारणसभाले डा. मुक्तिनाथ भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति चयन गरेको हो ।
मंगलबार सम्पन्न सधारणसभाबाट डा. भट्टराईको अध्यक्षतामा बनेको नयाँ सञ्चालक समिति सदस्यहरुमा डा. तिलकचन्द्र शाह, डा. सुर्य नारायण शाह, भीम प्रसाद पौडेल, बालचन्द्र सुब्बा, प्रेम बहादुर देवकोटा, देवकी देवी भट्टराई, बिक्रम कुमार साह र राजकुमार भट्टराई रहेका छन् ।
२०५६ सालमा दमक ५ मा स्थापना भएको सो अस्पतालमा हाल एक सय बेड रहेका छन् । सिटिईभिटीबाट सम्बद्धन भएका कक्षाहरु समेत सो अस्पतालमा संचालित छन् ।
सो अस्पतालले हालैमात्र थेरापी सेवा समेत सुरु गरेको छ । साधारण सभाको अवसर पारेर शुरु गरिएको सो सेवाको अस्पतालका संस्थापक अध्यक्ष शेरबहादुर भट्टराईले उदघाटन् गरेका थिए ।